भदौ १३, काठमाण्डौ । दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल हुँदै भारतमा कोकिन सप्लाइ गर्ने समूहलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तीन मुलुकका तीन जना नागरिकलाई झन्डै
भदौ १३, काठमाण्डौ । मुलुकमा दुई नयाँ राष्ट्रिय दल थपिएसँगै संसद सचिवालयलाई ती दल र दलका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चटारो छ । सचिवालयले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पाए प्रमाणपत्र
भदौ ९, काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको छ । आयोगले नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत
भदौ ८, काठमाण्डौ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको व्यक्तिगत मनमुटावले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दलमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । नेपाल अब नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतृत्वकर्ता
ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो
काठमाण्डौ, भदौ ७ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको छ । भारतबाट मूल्य बढेर आएको जनाउँदै निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र
भदौ ३, काठमाण्डौ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र मधेस केन्द्रित दल जसपा नेपालमा फुट
माधब कुमार नेपाललाई कमजोर बनाउन केपी ओली सफल !
भदौ ३, काठमाण्डौ । नेकपा विघटन भएर एमाले ब्युँतिएपछि सुरु भएको पार्टी विग्रहमा दोस्रो तहका नेताहरुको ठुलो पंक्तीले माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए । अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिगमनको बाटो समातेकोले
साउन ३२, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले अपबित्र गठबन्धन र सत्ता स्वार्थका कारण मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ महिना
सभापति देउवाले एकलौटी गरेको रामचन्द्र पौडेलको आरोप
साउन ३२, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बाध्य भएर महाधिवेशनको मिति सार्न सहमत भएको खुलासा गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २६९ उपधारा ४ अनुसार महाधिवेशन भएको
नेपाली कांग्रेसको विगतदेखि बर्तमानसम्म : यस्तो छ महाधिवेशनको इतिहास
साउन २८, काठमाण्डौ । २००३ सालदेखि नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको रुपमा यात्रा प्रारम्भ गरेर सङ्घर्षका अनेकौँ चरण पार गरिसकेको छ, नेपाली कांग्रेसले । २००३ सालको मजदुर आन्दोलनदेखी २०६२–६३ को जनआन्दोलन, संघीय
नेकपा एमाले : एकता कि विभाजन ?
साउन २८, काठमाण्डौ । नेकपा एमाले विभाजनको मुखमा छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समुहको माग बमोजीम पार्टीलाई एक बनाउन अस्वीकार गरेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल
असारमा सकिनुपर्ने जनगणना अझै सुरु हुन सकेन
साउन २८, काठमाण्डौ । गएको असार महिनाको पहिलो साता नै सकिनु पर्ने राष्ट्रिय जनगणना कोरोना महामारीका कारण सुरु नै हुन सकेन । सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत विषयका नीति बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक